Kuboshwe nephoyisa kwabasolwa ngokubamba inkunzi e-OR Tambo | News24
Kuboshwe nephoyisa kwabasolwa ngokubamba inkunzi e-OR Tambo
Pretoria – Kubalwa nephoyisa phakathi kwabantu abane ababoshwe ngecala lokubanjwa kwenkunzi esikhumulweni sezindiza i-OR Tambo, kusho iBamba likaKhomishana wamaPhoyisa uLieutenant General Khomotso Phahlane ngoLwesibili ebusuku.
"Ukusebenza ngokuzikhandla nangokuzimisela kwethimba kuholele ekuboshweni kwabasolwa.
"Sizibophezele njengabomthetho ukusebenza ngokubambisana ukuze siqinisekise ukuthi abasolwa bayaboshwa. Esikhathini esingangesonto kuqhubeka uphenyo futhi sibuza abantu imibuzo sesingakuqinisekisa ukuthi bane ababoshwe ngenhloso yokuba baphekwe ngemibuzo.”
OLUNYE UDABA: Ubuyela enkantolo umama ngecala lokuthunjwa kwengane
Uthe ababili kubona bavele eNkantolo kaMantshi eKempton Park ngoLwesibili.
Imali kodwa ayikatholakali.